Home » Apụta » AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ NDỊ ỌZỌ AKWỤKWỌ NDỊ DỊ N'ỤLỌ NCHE AKWỤKWỌ NDỊ NA-AHỤ NA 2019 NAB SHOW
- Ịgbasawanye mmekorita iji tinye oghere na họpụtara Gosi New York -
WASHINGTON, DC - A ga - emeghachiri onyinye ngosi Video Travel (TVA) na họpụtara Gosi na April 9 na Las Vegas. E kere ya Citizine Networks, Inc., onyinye a na-asọpụrụ mmemme vidio ndị ọhụrụ na ndị na-akpali akpali na ndị 2018 site na ndị na-esepụta onwe ha, ndị njem njem, ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụdị ndụ.
họpụtara Gosi na-adọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100,000 mgbasa ozi, ndị ntụrụndụ na ndị ọkachamara na nkà na ụzụ si gburugburu ụwa ma ga-ejekwa ozi ọzọ dịka onye na-akwado nkwado nke usoro onyinye. họpụtara Gosi ga-eme April 6-11 na Ụlọ Nzukọ Convention nke Las Vegas.
Ndị na-ahụ maka TVA ghọtara ọtụtụ cinematic dị iche iche na ihe ntanetị dijitalụ dị n'ime ụzọ abụọ. A ga-amata oru ngo nke onwe gị n'ime Track Independent. A ga-amata ọrụ site na njem njem, ụdị ndụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na Ahịa ọrụ. Ndị mmeri site na egwu ọ bụla ga-enweta ọkwa dị iche iche. Tụkwasị na nke a, ndị mmeri nke onyinye Nomad na Ntị Abụọ abụọ ga-enweta ego ego.
"N'ihe ngosi nke njem nleta gara aga gụnyere ihe fọrọ nke nta ka 400 ntinye sitere na mba 26 gafee ụwa," ka onye isi ojii na onye isi obodo Philip DeBevoise kwuru. "Anyị na-atụ anya ịmepụta ihe ịga nke ọma na 2019 họpụtara Gosi na ijikọta ndị njem mgbasa ozi na ndị ọrụ vidiyo na ụlọ ọrụ na-abịa họpụtara Gosi New York."
Ụmụ amaala ga-eweta Ike nke vidio na $ 1 Trillion Travel Industry na October 17 dịka akụkụ nke 2018 Họpụtara Gosi New York usoro ogbako. Oge a ga-achọpụta mmetụta nke vidio na njem ndị njem na-emefu na otú ndị na-ese fim, ndị na-ahụ maka mgbasa ozi, ụdị na ndị na-emepụta ọgwụ nwere ike ịzụlite na ịkọwa ihe ha nwere. Mgbe nnọkọ ahụ, Citizine ga-abanye ozi n'ikuku netwọk ebe ndị bịaranụ ga-enwe ohere izute ndị ọkachamara na ndị ahịa na njem na okomoko ụdị.
Ihe niile ntinye vidio ga-enwerịrị ma ọ bụ nke e bipụtara n'etiti Jennifer 1, 2018 na December 31, 2018. VAT na - anabata nnyefe site na Jenụwarị 13, 2019.
Ozi agbakwunyere banyere onyinye a dị Ebe a. Ozi ndị ọzọ gbasara họpụtara Gosi New York bụ Ebe a.
2016 họpụtara Gosi 2016 họpụtara Gosi Job Fair 2016 họpụtara Gosi News Broadcast Naa Awards Broadcast Naa Magazine Broadcasters Convention Broadcasting Convention họpụtara 2015 họpụtara 2016 họpụtara Gosi Họpụtara Gosi 2016 họpụtara show ọrụ Họpụtara Gosi Las Vegas Họpụtara Gosi Registration NAB16 nabshow National Association of Broadcasters Gosi Post Production World sprockit Ultra HD Forum	2018-10-30
Previous: NAB NA-EKWU NDỊ BAỊBỤRỤ NDỊ KWESỊRỊ ỤBỌRỤ KWESỊRỊ ỤBỌCHỊ NA NKWUKWỤKWỌ NKWUKWỌ
Osote: Nugen Audio's Halo Upmix Na-enye Ụjọ Ntị Maka Netflix's, The Haunting of Hill House